घर युरोपियन स्टार मेसन होलगेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
फेब्रुअरी 15, 2020
मेसन होलगेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। क्रेडिट: Picuki र TheSun
सुरू गर्दै, उनको उपनाम "Masey“। हामी तपाईंलाई मेसन होलगेटको बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज दिन्छौं जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
प्रारम्भिक जीवन र मेसन होलगेटको उदय। क्रेडिट: TheSunUK र WalesOnline
हो, सबैको लागि होलगेटलाई चिन्छ खेल को शैली- नियन्त्रित आक्रामकता र रक्षात्मक बहुमुखी प्रतिभा। जे होस्, केहि थोरैले मेसन होल्गेटको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मेसन होलगेट बचपन कहानी
मेसन होलगेट पारिवारिक पृष्ठभूमि
मेसन होलगेट शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
मेसन होलगेट जीवनी- प्रख्यात कथा उनको रोड
मेसन होलगेट जीवनी- उनको उठाउने प्रख्यात कथा
मेसन होलगेट प्रेमिका को हो?
मेसन होलगेट व्यक्तिगत जीवन
मेसन होलगेट परिवार तथ्यहरू
मेसन होलगेटको आमाको बारेमा बढि
मेसन होलगेटको बुबाको बारेमा बढि
मेसन होलगेटको बहिनीको बारेमा बढी
मेसन होलगेट जीवनशैली
मेसन होलगेट अनटोल्ड तथ्यहरू
तथ्य # 1: मेसन होलगेट तलब ब्रेकडाउन
तथ्य # २: मेसन होलगेट फिफा सम्भावित
तथ्य # 3: मेसन होलगेटको अर्को पक्ष
तथ्य # 4: मेसन होलगेटको ट्याटू
तथ्य #:: मेसन होलगेटको धर्म
मेसन होलगेट विकी
मेसन होलगेट बचपनको कथा
सुरु गरेर, उसको पूरा नाम मेसन एन्थोनी होलगेट हो। अ foot्ग्रेजी फुटबलर अक्टोबर १ 22 1996 of को २२ औं दिनमा उसको बुबा, टोनी होलगेट र आमाको जन्म भएको थियो।नाम अज्ञात) डोनकास्टर, बेलायतको अंग्रेजी शहरमा। सानो मेसन आफ्नो प्यारी आमा बुबाको दोस्रो छोरा र पहिलो छोराको रूपमा जन्म भएको थियो। तल चित्रण गरिएको, हाम्रो आफ्नै मेसी उनको ठूली दिदीसँगै हुर्कियो जो टेलरको नामले जान्छ।
मेसन होलगेटले आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरू आफ्नो बहिनी टेलरसँग बिताए। क्रेडिट: Picuki
उत्तरी इ England्ग्ल्यान्डमा हुर्कनु दुबै दिदीबहिनीको लागि सुन्दर अनुभव थियो। बेबी मेसनसँग केवल उनकी जेठी बहिनी थिएन (Tayler) उसको वरिपरिको बच्चाको रूपमा। उनले आफ्नो प्रारम्भिक जीवनको प्रायः भागहरू निश्चितसँगै बिताए बाल्यकालको सब भन्दा राम्रो साथी। तल चित्रित, बच्चा मेसन (उमेर २) उसको बाल्यावस्थाको सब भन्दा मिल्ने साथीसँगै उनको घरको सोफामा सहज देखिन्छ।
मेसन होलगेटको बाल्यकालको फोटो- यहाँ, भविष्यका अंग्रेजी तारालाई आफ्नो बाल्यकालको सब भन्दा मिल्ने साथीको साथ चित्रण गरिएको छ। क्रेडिट: Picuki
उसको प्यारो अँध्यारो दृश्यको आधारमा, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि होलगेटको पुर्खा पूर्ण रूपमा अ isn't्ग्रेजीमा छैन। सत्य यो हो कि उहाँसँग अद्वितीय गुणहरू छन् जसले संकेत गर्छ कि उहाँ दुवै अंग्रेजी र अफ्रिकी परिवारका जराबाट आउनुभयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?…, मेसन होलगेट लोकप्रिय फुटबलरहरू मध्ये एक हुन्; एलेक्स ओक्सलेड-चम्बेर्लेन, अधिकतम एरन्स, केली वाकर र क्रिस सानो, आदि जो जमैकन र ब्रिटिश परिवार मूल हो। मेसन होलगेटका बाबुआमा मध्ये एक - उसका बुबा जमैकाबाट आउनुभएको छ जबकि उहाँकी आमा ब्रिटिश हुनुहुन्छ।
उसको बच्चा बहिनी टेलर होलगेटको साथ चित्रित मेसन होलगेटका आमा बुबालाई भेट्नुहोस्
तपाईं इ England्ल्यान्डमा जन्मनुभएको, क्यासनियन टापु राष्ट्रसँग मेसन होलगेटको सम्बन्ध (जमाइका) उहाँ आफ्ना बुवा हजुरबा हजुरआमाबाट आउनुहुन्छ। यसले स his्केत गर्दछ कि उसको बुवा (टोनी होलगेट) इ England्ल्याण्डमा जन्म भएको थियो (विकिपेडिया रिपोर्ट).
दक्षिण यार्कशायरमा हुर्किएको, होलगेट सधैं रुचि भएको थियो उ फुटबल खेल्ने क्रममा जब ऊ सानो थियो। ऊ यस्तो किसिमको बच्चा हो जसलाई अरू केहि चाहँदैन थियो तर उपहारको रूपमा मात्र फुटबलको बल। उसलाई आफ्नो इच्छा प्रदान गर्न, मेसन होलगेटका बाबुआमा आफ्ना छोरालाई उनीहरूको परिवार क्लब arn बार्न्स्लेको acade वर्षको उमेरमा एकेडेमी इकाईमा भर्ती हुन सहमत भए। उनका परिवारको नजिकको क्लबमा फुटबल शिक्षाको खोजीले बच्चाको प्रदर्शनमा प्रभाव पारेको थियो।
मेसन होलगेटको बाल्यकालको फोटो- त्यस समयमा उनी बार्न्सले 9. वर्षको उमेरमा सामेल भए। क्रेडिट: डेलीमेल
क्लबको एकेडेमी स्तरको माध्यमबाट प्रगति हुँदै गर्दा, उच्च मूल्या rated्कन गर्ने युवालाई पदचिन्ह पछ्याउन सुझाव दिइयो जॉन स्टोन्स उनको रोल मोडल र साथी Barnsley एकेडेमी स्नातक। पत्थर मेसन भन्दा तीन वर्ष अगाडि थियो।
मेसन होलगेट जीवनी- उहाँको फेम कहानी
एकेडेमी स्नातक पछि, मेसनले दौडिरहेको मैदानमा हिट गर्न थाल्यो। बढ्दो युवाको साथ वरिष्ठ फुटबलको एक शानदार पहिलो स्वाद थियो। उनको प्रयासले उनलाई लिग वन क्लबले वर्षको युवा खेलाडीको रूपमा नामाकरण भएको देख्यो। त्यो २०१/2014/२०१ season सिजन, होलगेटले असंख्य अवसरहरूमा आफ्नो स्थिति बहुमुखी प्रतिभा देखाए जुन इ feat्ल्याण्डको शीर्ष क्लबहरू आकर्षण गर्ने एउटा उपलब्धी हो।
अ -्ग्रेजी-जमैकाका फुटबलरको परिवार क्लब बार्न्सले एफसीमा एक उल्का वृद्धि भयो
धेरै दबाब पछि, Barnsley सही मूल्यमा एभर्टन को लागी Holgate छोड्न राजीनामा गर्नुभयो। योर्कशायर डिफेन्डरले पूर्व बार्न्सले एकेडेमी स्नातक जोन स्टोन्सको पाइला पछ्यायो।
२० लाख डलरको बदाम हस्तान्तरण शुल्कका लागि टोफीमा सामेल हुँदा मेसनले आफूले आशा गरेको भन्दा बढी बाँच्ने वाचा गरेका थिए। मेसन होलगेटका परिवारका सदस्यहरूको खुशीको कुनै सीमा थिएन जब उनीहरूले आफ्नै ई England्गल्यान्ड U2 लाई प्रतिनिधित्व गर्न बोलाइएको थियो जुन सीजन ऊ एभर्टनमा सामेल भयो।
डर: तपाईंलाई थाँहा थियो?… होलगेटलाई एकपटक डर लाग्यो कि एभर्टन पहिलो-टीमको अवसर गुडिसन पार्कमा कहिल्यै आउँदैन। संग Zouma, माइकल केईन र Yerry Mina उसको अगाडी ठट्टा गर्ने क्रममा, युवा अ for्ग्रेजी मानिसका लागि अवसरहरू सीमित थिए।
मेसन होलगेट जीवनी- उहाँको उदय कथा फेम
धेरै जसो युवाहरूले के गर्छन्, जस्तै मेसनले अधिक एभर्टन पहिलो-टीम स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न अनुभव प्राप्त गर्नमा गयो। उनी Championणमा च्याम्पियनशिप साइड वेस्ट ब्रोमविच एल्बियनमा सम्मिलित भए जहाँ उनले आफ्नो भुक्तानी गरे DUES उनीहरूलाई th थान फिनिश र चैम्पियनशिप प्ले-अफ सेमीफाइनलमा मद्दत गरेर।
सबैभन्दा अविस्मरणीय अंश मेसन होलगेटको जीवनी अक्टूबर २०१ 2019 को वरिपरि आएको थियो, एक पटक उसले स्थायी स्थान एभर्टन इलेवनबाट शुरू गरेको इलेवनबाट मोहर लगाएको थियो। मेसन होलगेट यस अवसरमा धेरै अवसरहरूमा उकालो लाग्यो, जुन उसले २०१ the/२०२० सत्रमा पहिलो टोफीको गोल दाँदेको देख्यो।
२०१२/२०२० सिजन वास्तवमा मेसेको लागि अविस्मरणीय मौसम हो। क्रेडिट: मिररफुटबल
लेख्ने समयमा, मेसन भविष्यको इ England्ल्यान्ड स्टार मानिन्छ र यसको रूपमा हेरिन्छ कार्लो एन्सलोटीको रक्षा मा सबै भन्दा राम्रो वर्तमान विकल्प। यद्यपि उनले जोन स्टोन्सले जस्तै प्रकारको flamboyance देखाएनन्, तर उनी साथमा थिए Tyrone Mings थ्री लायन्सको रक्षाको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञाहरूको रूपमा हेरिन्छ। होलगेटको इ England्ल्यान्ड कल बेक गर्न जारी छ र अब पहिलो वरिष्ठ इ England्ल्यान्ड मुनि उपस्थित हुनको लागि ट्राई गरिएको छ गेरैथ साउथेट. बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो.
मेसन होलगेट को हो? केटी
उनको प्रसिद्धिमा बृद्धि संग, यो निश्चित छ कि एभर्टन र अ football्ग्रेजी दुवै फुटबल प्रशंसकहरु मेसन होलगेटको प्रेमिका को हुन सक्छ भनेर जान्न चिन्तित हुनु पर्छ। आफ्नो प्यारा बच्चा अनुहार आफ्नो खेल को शैली संग जोडिएको देखिन्छ कि सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीहरु को लागी एक एक-लिस्टर को रूप मा राख्दैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गरीरहेको छैन। हामीसँग मेसन होलगेटको प्रेमिकाको बारेमा तपाईंको सोधपुछ गर्न सबैभन्दा नजिकको उत्तर खोज्नुहोस्। उनको नाम हो पिया मिया.
धेरै फ्यानहरूले सोधेका छन्- मेसन होलगेटको प्रेमिका को हो? यहाँ हाम्रो नजिकको उत्तर छ। क्रेडिट: डेलीमेल र आईजी
पिया मिया एक अमेरिकी गायक, गीतकार, अभिनेत्री र इन्स्टग्राम मोडेल हुन्। पिया मियासँग मेसनको सम्बन्ध हालसालै सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्न सकेन। हालसालै एभर्टन स्टार दुबई मा आश्चर्यजनक पिया मिया संग पार्टी गर्दा देखा परेको थियो जब एक मिनी ब्रेक मा, एक उपलब्धि कि rइलेशनशिप अफवाहहरू। तल हामीले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा नजिक छ।
Masey र उसकी अफवाह गर्लफ्रेंड पिया मिया एक पटक दुबई नाइट क्लब मा आफूलाई रमाइलो। क्रेडिट: TheSun
तलको भिडियोमा, अंग्रेजी डिफेन्डर एमा रमाईलो भेटियो शैम्पेन स्नान र तेजस्वी मोडेलको साथ शैम्पेनको बोतलबाट ग्लगि।। क्लिप (तल) सुनौलो बमशेल द्वारा उनको ful लाख भन्दा बढी इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई अपलोड एक मुट्ठीभर सोशल मीडिया भिडियोमा देखा पर्‍यो।
मेसन होलगेटको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरूमा स्वागत छ। यस सेक्सनमा, तपाईंले भविष्यको इ England्ल्यान्ड स्टारले पिचबाट के गर्छ भनेर जान्न सक्नुहुनेछ। पहिले, पिचबाट टाढा, मेसन विनम्र, मित्रैलो छ तर सबै भन्दा रमाइलो छ।
फुटबल मुख्यतया एक पुरुषको खेल हो, जुन हामीले लक्ष्यहरू हेर्ने आशा गर्छौं। तर धेरै प्रशंसकहरू खेलाडीहरू पिचबाट धेरै नजिक भएको देखेर छक्क पर्छन्। दुबै मेसन र टम डेभिसले आफ्नो अफ-पिच ब्रोमासेन्सलाई विश्वसँग साझा गर्न अतिरिक्त चरणमा पुगेका छन्।
मेसन होलगेटको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
तेस्रो: माथि देखाईएको व्यक्तिगत जीवनमा, मेसन होलगेट आफ्नो परोपकारी पक्षको लागि परिचित छ। उनले बखत जर्सीका साथ प्रशंसकहरूलाई भेट्न समय सिर्जना गर्दछ र साथै टीम टीमलाई बिरामी प्रशंसकहरू भेट्न अस्पताल जान्छन्।
तेस्रो, मेसन होलगेटको व्यक्तिगत जीवनमा, उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आवश्यक व्यायाम भन्दा बढि उहाँलाई कठिन बनाउने बनाउनुहुन्छ। एक सुन्दर र नरम देखिरहेको डिफेन्डर को रूप मा, उनी आफ्नो साधारण देखिन्छ कि कठिन कसरत प्राप्त द्वारा न्याय गर्न बेवास्ता। अन्तमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, मेसनले धेरै गुणस्तरीय समय कसैसँग बिताउन मन पराउँछन् जो पहिलेको सम्बन्धबाट आफ्नो छोरा जस्तो देखिन्छ।
मेसन होलगेट पारिवारिक तथ्यहरू
सुरूबाट, मेसन होलगेटका परिवारका सदस्यहरू (तल चित्रमा) आफूलाई एक "टोली“। यो संकेत गर्दछ कि तिनीहरू एक अर्काको धेरै नजीक छन्। यस सेक्सनमा, हामी मेसन होगाटका अभिभावकहरूको साथ सुरु गरेर सबै सदस्यहरूमा बढी प्रकाश पार्नेछौं।
अनुसार लिभरपोल इको, मेसनले एक पटक खुलाए कि उनको आमाले अझै उनलाई चिच्याउछन् जसको अर्थ त्यो अनुशासनशास्त्री हुन सक्छ। साथै, सुपर आमा (तल चित्रमा) पनि सम्भवतः उनको छोराको आत्मविश्वासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ आफ्नो नरम लुकको बावजुद।
मेसन होलगेटको परिवारले आफूलाई एक टीईएएम भन्दछन् र उनको आमा धेरै नै अनुशासनात्मक हुने सम्भावना छ। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
मेसनले उनको आमाको बारेमा जानकारी दिएका थिए जब उनले पुरानो हंसको सेन्ट एन्ने स्टानले प्राइमरी स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई भेटे (लिभरपुल को एक भित्री शहर क्षेत्र) जनवरी २०१ around को वरपर।
टोनी होलगेट एक सुपर कूल बुबा हुनुहुन्छ जसलाई प्राय जसो सोशल मिडियामा उनको प्रदर्शनमा टिप्पणी गरिएको देखिन्छ। तपाईं हामीसँग सहमत हुनुहुन्छ कि मेसन होलगेटको बुबा जीन प्रभावशाली छ, किन एउटा बच्चाले उसको छालाको र after्गमा हेर्यो तर उसको हेराईमा होइन।
मेसन होल्गेटको पारिवारिक जीवनलाई भेट्नुहोस्- यहाँ उसको अति गर्वपूर्ण बुबा, टोनी होल्गेट हुनुहुन्छ। क्रेडिट: ट्विटर
यदि यस लेखको मेसन होलगेटको पारिवारिक पृष्ठभूमि भागमा प्रस्तुत गरिएको बाल्यकालको फोटोको लागि होईन भने, हामी तपाईंलाई शर्त दिन्छौं कि टेलर मेसनकी दिदी हुन् भनेर तपाईंलाई थाहा छैन। मेसन होल्गेटको अनुहारको राम्रो अनुहारको कारणले, प्रशंसकहरूलाई अनुमान छ कि उहाँसँग एउटी राम्री बहिनी (टेलरमा) छ जो सबै ठूला हुनुपर्दछ। हो, तपाईंको अनुमान सही थियो। टेलर धेरै सुन्दर छ।
मेसन होलगेटको बहिनी टेलर उनको भाई भएकोमा गर्व छ। क्रेडिट: आईजी
मेसन होलगेटकी बहिनी टेलर एक सुन्दर श्यामला जसले आफ्नो स्नाप मार्फत सबै मा विश्वास oozes इन्स्टाग्राम। उनी एक निःस्वार्थ व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो भाइलाई भावनात्मक समर्थन गर्दछन् यसको मतलब यो हुन्छ उनको जीवनलाई समात्नु।
मेसन होलगेट जीवन शैली
हाम्रो मेसन होलगेटको जीवनशैलीले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तलको चित्रको आधारमा, तपाईं हामीसँग सहमत हुनुहुन्छ कि मेसन होलगेट वास्तवमै एक राम्रो छ। शान्त र संकलित फिगर। धेरै फुटबल पैसा कमाउनु एक आवश्यक दुष्ट हो। अझ चाखलाग्दो कुरा के हो भने मेसनले आफ्नो कारको र colorलाई आफ्नो वार्डरोबसँग मिल्दछ। यो उनको शान्त र धेरै विदेशी जीवन शैली को एक संकेत हो।
यो मेसन होलगेटको कार हो- राम्रो देखिने फूटबलरले आफ्नो कारसँग मेल खानको लागि ड्रेसिंग मन पराउँछ। क्रेडिट: एभर्टन
मेसन होलगेट अनटाल्ड तथ्य
तथ्य # १: मेसन होलगेट तलब ब्रेकडाउन
लेखेको समयमा जस्तै एभर्टनसँग डिफेन्डरको सम्झौतामा उसले ठूलो तलब कमाइरहेको देख्छ £ 1,300,000 प्रति वर्ष। यसले उसलाई करोडपति बनाउँछ। क्रसिंग मेसन होलगेटको तलबलाई गहिरो संख्यामा, हामीसँग निम्न छ;
पाउण्ड स्टर्लिंगमा मेसन होलगेटको तलब
प्रति वर्ष £ 1,300,000
प्रति महिना £ 100,000
प्रति हप्ता £ 25,000
प्रति दिन £ 3,371
प्रति घण्टा £ 148.8
प्रति मिनेट £ 2.48
प्रति सेकेन्ड £ 0.041
तलको प्रस्तुतीकरणमा, हामीले मेसन होलगेटको तलब हरेक सेकेन्डमा बढाएका छौं जुन कहिले पनि यो पृष्ठ खुला छ भने गणना गर्न थाल्छ।
तपाईंले मेसेज होल्गेटले कत्ति धेरै कमाई गर्नुभयो जब तपाईंले यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
यो भने £ -माथिको आंकडा बढेको छैन, यसको मतलब यो हो कि तपाईं एक बाट हेर्दै हुनुहुन्छ AMP पृष्ठ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ प्रति सेकंड मेसन होलगेटको तलब आय हेर्न। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यसले युकेमा कम्तिमा worker.२ बर्ष औसत कामदारहरू लिन सक्नेछ Masey १ महिनामा कमाउँछ।
तथ्य # २: मेसन होलगेट फिफा सम्भाव्य
मेसन होलगेट कुनै पनि फिफा प्रशंसक जसले राम्रो मनपर्ने टीमको साथ नयाँ क्यारियर शुरू गर्न चाहन्छ को लागी एक राम्रो बचाव विकल्प हो। तल चित्रण गरिएको, उहाँ एक उच्च सम्भावित रेटिंगको साथ फिफामा सबै भन्दा राम्रो युवा डिफेन्डरहरू मध्ये एक हो।
उसको फिफा रेटिंग्सले मेसे निश्चित रूपमा भविष्यको खेलाडी हो भनेर देखाउँदछ। क्रेडिट: SoFIFA
धेरै निश्चितताको साथ, हामी निश्चित छौं कि होलगेट निश्चित रूपमा उसको पार हुनेछ 82 रेटिंग मार्क उसको लागि फुटबल सिमुलेशन भिडियो गेम द्वारा सेट गरियो।
तथ्य # २: मेसन होलगेटको अर्को पक्ष
मेसन होलगेटले एक पटक अंग्रेजी एफए द्वारा लिखित चेतावनी प्राप्त गर्‍यो। उनलाई जब उनले पठाएको ट्वीट्सका लागि शिक्षा कार्यक्रममा भाग लिन आदेश दिइयो 15 र 16, एउटा जसमा उनले समलिंगी भाषा प्रयोग गर्थे। मेसन होलगेटले त्यस बेला ट्विटरमा आफ्ना साथीहरूलाई जवाफहरू पोष्ट गर्‍यो, जवाफ जसमा शब्दहरू समावेश गरिएको थियो "एफए * जी "," फ्याग * ग्याट्टट् "र" ब्याटि * केट"।
त्यो समयमा उनी कानुनी वयस्क थिएनन्, अ .्ग्रेजी एफए उहाँमाथि सहज भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?…, प्रतिद्वन्द्वी प्रशंसकहरूले मेसन होल्गेटको सोशल मिडिया खाताहरू यस अनुशासनिक प्रमाणको लागि खडा गरे पछि उनको झगडा पछि रोबर्टो फर्मिनो। यो एक एभर्टनको बिरामी-स्वभाव एफए कप तेस्रो-राउन्ड घाटामा भयो।
Masey को अर्को पक्ष तपाईलाई शायद थाहा छैन। क्रेडिट: बीबीसी
तथ्य # २: मेसन होलगेटको टाटु
ट्याटु संस्कृति आजको खेल संसारमा धेरै लोकप्रिय छ। आजका फुटबलरहरू प्रायः यसको प्रयोग आफ्नो धर्म वा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरू चित्रण गर्नका लागि गर्छन्। लेखनको समयमा हाम्रो आफ्नै Masey ट्याटु-मुक्त छ। तल चित्रित, उहाँको शरीरमा कुनै मसी छैन।
मेसन होलगेटको ट्याटु तथ्यहरू- हाम्रो आफ्नै मेसी ट्याटु मुक्त छ। क्रेडिट: टोनी म्याकआर्डल - एभर्टन एफसी
तथ्य # २: मेसन होलगेटको धर्म
मेसन होलगेटका बाबुआमाले उनको जन्ममा उनलाई क्रिश्चियन नाम दिए "एंथोनी”र उनलाई इसाई धर्म धर्म अँगाल्नको लागि हुर्काए। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको बीचको नामएंथोनी"एक इसाई नाम हो जुन इन्टोनियन दि ग्रेट, इन्टानिभियाको मोनस्टिज्मका संस्थापकको पूजाका कारण आएको हो। यसले मेसन होल्गेटका अभिभावकहरूले उसलाई क्याथोलिक हुर्काएको देखाउँदछ।
मेसन होलगेट wiki
मेसन होलगेटको जीवनीको हाम्रो निष्कर्षले तपाइँलाई उसको विकी ज्ञानको आधार दिन्छ। तल चित्रण गरिएको, यसले तपाईंलाई संक्षिप्त र सजिलो तरीकाले उसको बारेमा छिटो जानकारी प्रदान गर्दछ।
पुरा नाम: मेसन एन्थोनी होलगेट
जन्म मिति: २२ अक्टोबर १ 22 1996 ((उमेर २ 23 फेब्रुअरी २०२० मा)
जन्म स्थान: डोनकास्टर, इ England्ल्यान्ड
अभिभावक: टोनी होलगेट (पिता)। आमाको नाम लेख्दा अज्ञात छ
भाई बहिनीहरू टेलर होलगेट (बहिनी)
परिवार मूल: जमाइका
युवा क्यारियर: Barnsley
उचाइ: F फिट ० मा (१.6 मि
प्रेमिका: पिया मिया (अफवाह)
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मेसन होलगेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
जेम्स मेडिसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
यो कुरा सुनेको छैन